Uluhlu lwakho lokuKhangela lweBlogger | Martech Zone
Uluhlu lwakho lokuKhangela lweBlogger
NgoLwesithathu, nge-22 kaJanuwari 2020 NgoMgqibelo, uJanuwari 2, 2021 Douglas Karr
Iinkampani ze-SEO ziyaqhubeka nokuzama ukwenza iziphumo zeinjini yokukhangela ... ayizukuma nje. UMat Cutts kaGoogle ubhale iposti enkulu, Ukonakala kunye nokuwa kweendwendwe kubhloga kwe-SEO kubandakanya ividiyo kwivenkile yakhe kubloga lweendwendwe kwaye uMat ubonelela ngolu hlobo:
Ndifuna nje ukuqaqambisa ukuba iqela leendawo ezisezantsi ezikumgangatho ophantsi okanye zogaxekile ziye zanamathela kwi "ndwendwe zeblogi" njengesicwangciso-qhinga sokwakha amakhonkco, kwaye sibona okuninzi kakhulu kwimizamo ye-spammy yokwenza ukubhloga kweendwendwe. Ngenxa yoko, ndingacebisa ukuthandabuza (okanye ubuncinci isilumkiso) xa umntu efikelela kwaye ekubonelela ngenqaku lebhlog yeendwendwe.
Sitshanje ikhutshiwe blogger yeendwendwe apha Martech Zone. Umbhali weza kuthi esithi ufuna ukufumana ukubonwa ngakumbi kushishino lokuthengisa kwaye unethemba lokusibhalela amanqaku asezantsi. Simnike ukufikelela kwakhe kwaye wabhala iposti yokuqala.
Ndandithandabuza. Iposi lalinonxibelelwano oluncinci ngaphakathi kumxholo… ezimbalwa zazenziwe ngendlela eqhelekileyo kodwa enye yayicacile kwaye ndandixhalabile. Besisele sisebenzisa amakhonkco alandelayo kwimixholo ephumayo, kodwa andikakwazi ukushukumisa inyani yokuba ibingajoliswanga kumxholo ... kunye namakhonkco ajolise kakhulu. Amanye amanqaku amabini avela kumbhali kwaye kwafuneka ndiqale ndenze uphando.
Ndivavanye iprofayile yakhe ye-Twitter, iprofayile kaFacebook, iprofayile kaGoogle + kunye namanye amanqaku kwiwebhu yonke. Ngamnye wayenqabile… kungekho ncoko yobuqu, kungekho zitshomi, kunye nemibuzo malunga nokuba uvelaphi okanye uhlala phi ngoku. Ubonakala engumlinganiswa oyintsomi ngaphandle kwengqokelela yakhe yamanqaku kwi-intanethi. Ewe, andiqinisekanga nokuba sisibhengezo esichanekileyo na.
Umququ wokugqibela kukuba ndacela ikopi yelayisensi yakhe yokuqhuba. Ubhale watsho ukuba akakhululekanga ukubonelela ngolwazi lwabucala. Khange ndibuze nkcukacha zabucala… ngekhe wayigubungela idilesi yasekhaya kunye nayo nayiphi na idatha yobuqu. Ndifuna nje ubungqina bokuchongwa. Ngale nto, ndasusa lonke unxibelelwano kwizithuba zakhe kwaye ndatshintsha iziqinisekiso zakhe zokungena.
Ke… ukusukela apha ukuphuma nolu uluhlu lwam lokutshekisha:
Ukuchongwa ngokusesikweni -Le bhlog yam ligunya lam kwi-Intanethi kwaye ndifuna ukugcina ukubonakaliswa, imbeko kunye nomgangatho ukuze ndigcine kwaye ndikhule oku kulandelayo. Andizukubeka emngciphekweni kwi-backlinker ethile.
Imigaqo yokuSebenzisa -Siqinisekisa ukuba ababhali bethu bonke bayazi ukuba iyintoni injongo yebhlog yethu-ukubonelela abathengisi ngengqondo yokuba izixhobo kunye netekhnoloji zinokuchaphazela njani iinzame zabo zokuthengisa. Ayisiyokuthengisa okanye i-backlink! Nawuphi na omnye umxholo uya kususwa kwaye umbhali uya kugxothwa.
Iindima zabaxhasi -Bonke ababhali bethu bazakuqala ngokuba ngabanikeli… oko kuthetha ukuba banokubhala umxholo kodwa bangakwazi ukuwupapasha ngokwabo. Siza kuwajonga ngokutsha kwaye siwapapashe amanqaku abo de sibe sikhululekile ukuba bayakuqonda abakwenzayo.
Ukwazisa ngokugcwele -Ukuba kukho nabuphi na ubudlelwane obuhlawulelweyo phakathi kwethu, umbhali womxholo, kunye nezixhobo ezibonelelwe kwisithuba-olo lwalamano luya kutyhilwa kumfundi. Asikukhathaleli ukubonelela ngesiqulatho malunga nabaxhasi bethu okanye iimveliso kunye neenkonzo esingamalungu… kodwa abaphulaphuli bethu kufuneka bazi ukuba kukho ubudlelwane apho.
Nof ulandele - Onke amakhonkco awayi kulandelwa kwizithuba zeendwendwe. Akukho ngaphandle. Injongo yakho kufuneka ibe kukufikelela kunye nokufumana ukubonwa ngabaphulaphuli bethu kunye nokulandela- hayi ukubuyela umva kwi-SEO. Masigcine izinto eziphambili ngokubaluleka kuthi.
Imifanekiso eqinisekisiweyo -Nawuphi na umxholo obonakalayo uya kuba nelayisensi. Ukuba ibhlogi yethu yeendwendwe ayinazo izixhobo, siya kusebenzisa eyethu isitokhwe sefoto kunye nevidiyo. Andizukufumana ityala lokuphanga kwinkonzo yefoto yesitokhwe kuba ibhlog yeendwendwe ibambe umfanekiso ophendlo lwemifanekiso kuGoogle.
Umxholo owahlukileyo -Asidibanisi umxholo osuka kweminye imithombo. Yonke into esiyibhalayo yahlukile. Nokuba sabelana nge-infographics, ihamba nenqaku elikhethekileyo kubaphulaphuli bethu.
Ngawaphi amanye amanyathelo owathathayo ukuqinisekisa ukuba inkqubo yakho yebhlogi yeendwendwe kwibhlog yakho iyanceda kwaye ayonakalisi igama lakho kwi-Intanethi kunye negunya ngokukhangela nakwintlalo?
tags: Isicwangciso se-backlinkkukunikaolungeyonyaniblogger yeendwendweSEO
I-Acquia: Yintoni iPlatform yeDatha yoMthengi?
Iindlela eziQhelekileyo zoMqhubekisi woSetyenziso lweSoftware kufuneka azi i-2020
Mar 26, 2014 ngo-3: 10 AM
Umsebenzi omkhulu Douglas, sisithuba esihle kwaye sendalo ngakumbi malunga nento eyenziwa zezi bhlogi ngokubloga kweendwendwe. Andazi ukuba kutheni ungagxilanga kwezi zikhokelo ngaphambi kokuba unikezele ngokubhala iposti yeendwendwe kwibhlog yakho. Sonke siyazi ukuba ezi zikhokelo zisisinyanzelo kwaye sonke kufuneka silandele ngaphambi kokuba sivumele nabani na ukuba abhale ibhlog yeendwendwe kwibhlog yakho.